Yaa sabab u ahaa in maanta dalka Somaliya loo gacan galiyomadaxweyne African ah ma SSDF,SNM,USC ama Labada Shariif?
Posted by admin on July 01 2011 15:26:27
Somalia:(HS)- Dad badan waxey maalinkasta isweydiiyaan in Somaliya heerkaan gaarto ilaa uu maanta madaxweyne ka yahay nin African ah yaase sabab u ah ma SSDF,SNM,USC amaba labada Shariif?
Geni:(HS)-Dagaaladii ugu danbeyey ee ka dhacay inta badan koofurta Somaliya waxaa ku naf waayey shacab badan halka ay kuwane la ildaran yahiin macaluul ay qaarkood u geeriyoodeen saacadahii la soo dhaafay, iyadoo u dalkii Somaliya noqday wadan si rasmi ah u fashilmay dhinackasta hadey noqon laheyd siyaasad, dhaqaale, shacab, degaan iyo dhaqanba. halka madaxweynaha cusub ee Somaliya Yuweri Mosafeni uu hub iyo risaas ku sii qulqulinayo magaalada Mogdisho.
Dalka Somaliya oo ahaa wadan iska nabdoon baahi iyo dheregkasta oo ay shacabkiisu soo mareena aysan waligeed aduunyadu arag ayaa markii ugu horeysay waxaa dagaal xukun doon ah wadanka ka bilaabay saraakiil u ka mid ahaa madaxweynahii hore ee Somaliya Cabdullaahi Yusuf Ahmed kuwaasi oo dagaalkii Ethiopia iyo Somaliya markii u istaagay kedib ku fikiray iney xukunka ka tuuraan hogaamiyahii xiligaas jiray Alla ha u naxariistee Marxuum Moh'ed Siyaad Bare xiligaasi oo ay wadamo ka mid ah qaarada Africa ay doonayeen iney xornimo ka qaataan dalal reer Galbeed ah oo gumeysan jiray halka Somaliya aheyd ugu yaraan dal xor ah oo Calan iyo shacab xoogan lahaa nabadina ka jirtay.
Kacdoon kasta faa'idadiisa iyo qasaarahiisa ayuu leeyahay saraakiishii xabada ku bilaabay shacab wadankooda ku nool oo gaajo iyo dheregba ku faraxsanaa marba hadeysan qaxooti ku aheyn wadan ka baxsan wadankooda maanta iyagii waxii dhintay waa dhinteen laakinse kuwii noolaa waxey xitaa isku aamini waayeen iney maanta ku noolaadaan wadankii ay isagoo nabad ah Xabada ka rideen oo waa qaxooti waxaana saraakiishaas maanta ka mid ah Cabdullaahi Yusuf oo xitaa wadankii uu qaxootinimada ugu noolaa ee Yemen inta ay rabshado ku qabsadeen hada mid hor leh nabadgalyo ka raadiyey aaway Guulahii laga dhaxlay SSDF?
Inkasta oo ay dowladii xiligaasi jirtay maareysay kacdoonkii SSDF hadane waxaa ku soo xigay midkii SNM. In kasta oo aan caruurta Somaliyeed ee xiligaasi joogtay loo sheegin taariikh sax ah sidey wax u dhaceen amaba SNM ku bilaabtay hadane SNM sidey iyadu jecleyd ayey wax u qorteen dowladii xiligaasi jirtayna waxey iyaduna dadkii ka dhaadhicisay sidey iyadu jecleyd hadaan soo koobno dagaalkaasina koleyto labo qodob ayaa sabab u ahaa inuu bilaawdo.
1- Shacabkii ku noolaa gobolada waqooyi galbeed oo cadaadis siyaasadeed la saaray waxkastana lagu qasbay iney u aadan Mogdisho sida jaamacad, basabor, Driver L ama Liisinka baabuurta lagu wado iyo waxii la mid ah.
2- Qodobkan waxuu iskugu jiraa run iyo been. a)waxey dadka qaarkood leeyahiin Khaadkii ayaa laga gooyey shacabkii ku noolaa gobolada waqooyi kedibna sidaasi ayey ku bilaabeen kacdoonka b) Markastaba wey kici lahaayeen maadama waxkasta ciriiri looga dhigay aaqirkiina waxeyba noqdeen shacabkii ugu horeyey ee lagu garaaco diyaaradii dagaalka ee qaranka Somaliyeed ee lacagta lagu soo gaday ay canshuurtooda wax ka bixiyeen...WoW
Hadaba labada qodoba waa macquul si kasta oo ay noqotaba koleyto dadkaasi iyagoo barwaaqo ku dhex jiray iskama kicin wax uun baa ku qasbay iney kacaan waayo hadeysan Somali inteeda kale dooneyn maba jirin sabab ay ugu biiraan Somaliweyn amaba gobolada koofureed 1960.
SNM ujeedo kasta haka danbeyso iney kacaan laakinse waxaa si lama filaan ah u kacay ururkii ugu xumaa aduunyada urur ka hana qaada amaba kacdoon ay bini'aadam nool sameeyaan kii ugu xumaa United Somali Congress (USC) magaca markaad aragto waa qurux badan yahay laakinse waxaa ku dhax jiray dad an Somalinimo iyo wadaniyad laga urin karin. wey dhici kartaa in ragii dhisay aysan dooneyn iney sida ay hada wax u dhaceen wax u dhacayaan laakinse ay dhinteen xiligii ay hadafkooda ka shaqeysiin lahaayeen oo gedibna ay sidaan wax yeeleen dhalinyaro awalba qaab qabiil loo soo abaabulay oo aan la barani nidaam iyo aqlaal ay wadanka ku hanti karaan hadii ay guuleystaan. Isku soo duuboo USC ma jiro qof maanta ku dhiran karo inuu qoro taariikhda rasmiga ah ee ururka USC xitaa waxaan la heleyn qof ku faani karo inuu ka tirsanaa ururkii USC amaba uu qeyb ka ahaa ururkaasi ceebtiisa ayuu la dhuumanayaa.
Inkasta oo aan loo baahneyn in aanu ka sheegeyno xiligii qabqablayaasha iyo maxkamadahii waayo iyagu uma baahna in laga sheekeeyo waayo waxaa dhalay USC marka waqti badan uma baahna iyaga in qoraal lagu lumiyo waxaanu ka soo qaadeynaa USC2.
Isku dhaxyaac iyo barakac badan kedib waxaa wadanka u soo baxay labo Shariif oo aan waxbo is dhaamin midna ahaan jiray shaqsi iskaka noolaa Tuulo halka midka kalena uu xiligii dowladii Somaliya ee bari samaadkii uu Qaadka u keeni jiray saraakiisha ciidankii qaranka Somaliyeed ee fadhigoodu ahaa magaalada Baydhabo. ilaah waxuu qadaray in labadaasi nin ay ka mid noqdaan dadkii hogaaminayey siyaasadii Somaliya waliba xilal muhiim ah ka qabtay waxii ka horeyey shirkii Kampala Accord loogu mgac daray oo ay si qaab daran siyaasada dalka uga baxeen inkasta oo ay dad yar manta u heystaan iney walito siyaasada Somaliya ku jiraan.
Labada Shariif waqti badan ma galineyno taariikhdooda xiliga hada jirane kuma haboona in xitaa wax laga qoro waxey taariikhdooda in laga sheegeeyo ku haboon tahay xili ay shacabka Somaliyeed nabad iyo nolol heystaan waayo hada shacabkii ayaaba caasimadii Somaliya ee Mogdisho inta loogu geeyey 15 Kun ajaanib African ah habeen kasta Gaajo ugu dhimanayo halkaas iyadoo qoyskii ugu danbeyey ay habeenkii xaleyto ahaa ku geeriyoodeen Mogdisho kedib markii ay waayeen wax ay cunaan. sidoo kale waxaa dalka ka barakacay kumaan shacab ah oo nabadgalyo ku waayey dalkoodii hooyo kedib markii loo gacan galiyey madaxweyne African ah wxii ka danbeyey shirkii Kampala dadkuna waxa ay hada wadanka uga baxayaan waa hadiiba African madaxweyne kuugu yahay wadanka Somaliya maxaa diidaya in aad wadan kale oo African ah oo ay ugu yaraan nabadi ka jirto aado, sidaas ayeyna shacabku hada u xoojiyeen iney wadanka iskaka baxaan.
Isku soo duuboo halka ay shacabku magaalada Mogdisho gaajada ugu dhimanayaan xarunta Villa Ugandha waxaa lagu kala qeybsadaa malaayiin dolar oo iskugu jirato dhaqaalo loogu taba rucay dadka gaajada la il daran ee iskugu jira caruurta, dumarka iyo waayelka. sidoo kale madaxweynaha cusub ee Somaliya Yuweri Mosaveni waxuu aduunyada weydiisanayaa hub iyo ciidamo hor leh iyo waliba diyaarado dagaal halka shacabkii inuu madaxweyne u noqdo sababta u ahaayeen labada Shariif ay macaluul u dhimanayaan.
Taasi waxaa ka sii daran garoonka diyaaradaha magaalada Mogdisho waa garoonka kaliya ee aduunyada si rasmi ah loogu kala wareegsado lagacaha laga helo daroogada, burcad badeedka, dadka la afduubo. mudo 21 sano ah waa markii ugu horeysay ee dad ajnabi ah oo malaayin dolar wata lagu qabto garoonka Mogdisho taasina waxaa kenay dadkii ay raga la qabtay wada shaqeysan jireen ee Kenya joogay ayey ku heshiin waayeen sida ay u kala qeyb sanayaan lacagta marka loo geeyo dadka ay ku socoto sidaasi ayaana lagu maqlay maahane maalinkasta waxaa lagu kala wareegsadaa garoonka Mogdisho wax aysan dadka macaluusha u dhimanayo qiyaasi karin.
Guntii iyo gabo gabadii dalka Somaliya iyo shacabkiisuba maanta xor ma ahan markaad dhinac kasta ka eegto.
Somaliland iyo Puntland rabshadaha koofurta Somaliya ka jiro ayaan ka jirin maahane shacabka degaanadaasi jooga ee dalka u dhashay waxaa ka badan Ethiopianka shaqaalaha ka ah halkaasi ee deganadasi ugu nool siyaabo kala duwan. dhinaca siyaasatana waadba aragtaa mar hore ayaa gacanta lagu dhigay. iyadoo xaalku halkaas marayo ayaa hadane koofurtii Soamliya oo ayed meesha kaliya eeba dad damiir leh ku haray labada Shariif ay wadankii intiisa kael u gacan galiyeen hogaamiye African ah waxaa taasi ka sii daran awooda lagu siiyey qodobadii ka soo baxay shirkii Kampala ayaa ka daran.
Mudane baarlamaanow xaal qaado hadaadba sidan tahay.labada Shariifna hada dowldo shisheeye ah iney qanciyaan ayey ku mashquulsan yahiin iyagana waqti dhaw sidii madaxweynahii hore ee Indunisiya Suharta iyagoo inta idaacadaha yimaada Ooynayo waanu arki donaa.mar kale ayaanu shacabka u soo bandhigi doonaa waxa madaxweynahii Indunisiya ka Oohiyey isagoo madaxweyne ahaa.